नौ हजार विद्यार्थी दीक्षित [फोटोफिचर]- फोटोफिचर - कान्तिपुर समाचार
नौ हजार विद्यार्थी दीक्षित [फोटोफिचर]
पुस १६, २०७५ सुदीप कैनी, तस्बिर : इलिट जोशी/कान्तिपुर
काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सोमबार ९ हजार ५ सय ५ जना विद्यार्थीलाई दीक्षित गरेको छ । राजधानीको पुल्चोक क्याम्पसमा आयोजित त्रिविको ४४ औं दीक्षान्त समारोहमा स्नातक, स्नातकोत्तर, एफफील र विद्यावारिधि तह उत्तीर्ण गर्ने विद्यार्थी दीक्षित भएका हुन् । दीक्षित हुन पाउने ७४ हजार २ सय ८४ जनामध्ये ९ हजार ५ सय ५ जना विद्यार्थीले मात्र अनलाइनमार्फत आवेदन दिएका थिए । त्रिविको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले दीक्षित हुन चाहने विद्यार्थीहरुका लागि पहिलो पटक अनलाइनबाट आवेदन दिनसक्ने प्रबन्ध गरेको थियो ।
२०७४ जेठ १८ देखि २०७५ जेठ ३१ सम्म त्रिविका अध्ययन संस्थान र संकायअन्तर्गतका क्याम्पसहरुबाट विभिन्न तहमा उपाधि हासिल गर्ने विद्यार्थीलाई दीक्षान्त पदक र पुरस्कार प्रदान गरिएको उपकुलपति तीर्थराज खनियाँले जानकारी दिए । स्नातकोत्तर तहमा २०७२ को तीनवटा पदक रामपुर क्याम्पसकी सुलोचना श्रेष्ठले प्राप्त गरिन् । उनी ९०.८८ प्रतिशत अंक ल्याएर स्नातकोत्तर तहमा सर्वप्रथम भएकी थिइन् । उनले चान्सलर पदक, त्रिवि प्राध्यापक संघ स्वर्ण पदक र रामप्रसाद मानन्धर स्वर्ण पदक पाएकी हुन् ।
कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अहिलेको सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको दोहोर्‍याए । उनले दीक्षित विद्यार्थीलाई देश र समाजका लागि योगदान गर्न आह्वान गरे । सहकुलपति एवं शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले उच्च शिक्षामा सुधारको खाँचो रहेको जनाए । त्रिविले ५ वटा अध्ययन संस्थान, ४ वटा संकाय र ४ वटा अनुसन्धान केन्द्रमार्फत शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ । ६० वटा आंगिक र एक हजार ८५ सम्बन्धन पाएका कलेजमा पठनपाठन हुन्छ ।
प्रकाशित : पुस १६, २०७५ १७:३८
डा. श्रेष्ठ दुग्ध विकास संस्थानको बोर्डमा
काठमाडौँ — नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसनका केन्द्रीय अध्यक्ष डा. शितलकाजी श्रेष्ठ दुग्ध विकास संस्थानको बोर्ड सदस्यमा विज्ञको रुपमा मनोनयन भएका छन् ।
सरकारको निर्णयानुसार डा. श्रेष्ठलाई दुई वर्षको लागि मनोनयन गरिएको हो । भेटेरिनरी जनस्वास्थ्यमा स्नातकोत्तर डा. श्रेष्ठ विगत १३ वर्षदेखि यस क्षेत्रमा क्रियाशील छन् ।
प्रकाशित : पुस १६, २०७५ १७:१५